နှစ်ဟောင်း ကိုနုတ်ဆက်ခြင်း - Neoxian City
မကြာခင်မှာပဲ နှစ်ဟောင်းကုန်လုံ နှစ်သစ်ကို ကြိုရပါတော့မယ်။
နှစ်ဟောင်းမှာ ဘာတွေထားခဲ့မလဲ နှစ်သစ်ကို ဘယ်လို ကြိုဆိုကြမလဲ။ ၂၀၂၁ မှာ ကြုံတွေခဲ့ရတဲ့အတွေ့ အကြုံတွေက အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်း မကောင်းလှပါ။ ဘယ်လိုကြုံတွေ့ပါစေ ကြုံတွေ့သမျှကို အကောင်းဆုံးတုန့်ပြန် အဖြေရှာဖို့ အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလဲ မိတ်ဆွေတွေ တစ်ခုခု အခက်အခဲ ကြုံရင် ကျော်လွားသွားနိုင်မှာပါလို့ပဲ အားပေးခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်က မှားယွင်းစွာ မတုန့်ပြန်မိဖို့လိုပါတယ်။ အဲလို အားပေးရင်းနဲ့ပဲ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် မိသားစု အခက်အခဲ ကြုံပါတော့တယ်။ အမွေကိစ္စလား ခြံကိစ္စလို့ပြောရမှာလား မသိ၊ နှစ်ခုစလုံးအကြုံးဝင်နေတယ်ပဲ ပြောရမယ်ထင်ပါတယ်။
အမေက လာရှိုးမှာ အိမ်နဲ့ခြံလေးရှိတော့၊ လားရှိုးကပွဲစားနဲ့ ရောင်းမယ်လုပ်၊ အရောင်းအဝယ် ဖြစ်ခါနီးမှ လားရှိုးခြံမှာ နေတဲ့ အကို က သူ့အတွက် အိမ်သစ်ပြန်ရှာတာ စျေးကြီးလို့ အဆင်မပြေဘူး ပြောပြီး အိမ်ရောင်းတာကို လက်မခံနိုင်ကြောင်းပြောလာပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ စရံငွေ ပြန်ပေးမယ်လုပ်တော့ ပွဲစားက လက်မခံ၊ စရံစာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်၊ အမေပြီးရင် ပြီးတယ်၊ အမေရောင်းရင် ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောနဲ့ စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးခိုင်းတယ်။ အမေဖြစ်သူကလဲ သားကြီးဖြစ်သူ အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ စာချုပ်မှာလက်မှတ်မထိုးနိုင် ရှာဘူး။ စရံငွေပြန်ပေးမယ်လုပ်တော့ ပွဲစားက ဝယ်သူဘက်က တရားစွဲနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ ပြောဆို (ခြိမ်းချောက်)လာတယ်။ အဲဒါနဲ့ ရှေ့နေနဲ့ တိုင်ပင် တော့ လက်မှတ်မထိုးရင် တရားစွဲလို့မရကြောင်း၊ ဘာမှလုပ်လို့ မရကြောင်း သိလိုက်ရတယ်။ အဲဒါနဲ့ စရံငွေ မှာလက်မှတ်မထိုးနိုင်ကြောင်းငြင်းလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ပွဲစားက အန်တီအနေနဲ့ တရားရုံးမှာ ရင်ဆိုင်နိုင်ကြောင်း ထပ်ပြောပါတယ်။ အဲလို နောက်တစ်ခေါက်ထပ်ပြောလာတော့ ကျွန်တော်က ထပ်ပြောရင် ခြိမ်းချောက်မှု မြောက်တယ် ပြောမှ ပွဲ စားပါးစပ်ပိတ်သွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးမှာတော့ စရံငွေကို ပြန်အမ်းဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အေးအေးဆေးဆေးနဲ့ ဖြတ်ကျော်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ ပြောရမှာပါ။ ဒီထက်အသေးစိတ်ကိုတော့ မရေးတော့ပါ။
အရေးကြီးတာကတော့ ဘယ်လို အနေအထားဖြစ်ဖြစ် မောင်နှမ ချင်း သွေးမကွဲဖို့ အရေးကြီးတယ်ထင်ပါတယ်။ လက်ရှိမြေကွက်ကို ရောင်းလိုက်ရင် ကျန်တဲ့ မောင်နှမ အချို့အဆင်ပြေနိုင်ပေမယ့် လက်ရှိအဲမှာ နေထိုင်နေတဲ့ အကိုကြီးအတွက် အဆင်မပြေနိုင်ပါ။ အဲဒါနဲ့ မြေကွက်ကို တစ်ခြမ်းရောင်းပြီး ကျန်တစ်ခြမ်းကို မောင်နှမတွေ ခွဲယူဖို့ ဆုံးဖြတ်ဖြစ်ခဲ့ ကြပါတယ်။ win win အဖြေတစ်ခုကို ရှာလိုက်ရတာပါ။
အရင်က Facebook မှာ တွေ့တွေ့နေတဲ့ပုံလေးက အခုလို အခြေအနေမျိုးကြုံမှ ပိုနားလည်မိတယ် ထင်ပါတယ်။
မောင်နှမတွေကြားမှာ အခြေတကျရှိနေသူနဲ့ မရှိသူဆိုရင် အခြေတကျ မဖြစ်နေတဲ့သူကို ဦးစားပေးရမယ်ထင်ပါတယ်။ တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်မကြိုးစားတာကြောင့်မဟုတ်ပဲ ကံအကြောင်းတစ်ခုကြောင့် အဆင်မပြေနေတာမျိုးလဲရှိတတ်တာကြောင့် ပါ။
စည်းရိုး သံမှိုရိုက်ခြင်း ကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာ
ဒီဇတ်လမ်းပုံပြင်ကို ကြားဖူးတွေ့ဖူးပြီး ရိုးနေလောက်ပြီထင်ပါတယ်။ အဖေက သားကို သူ့သားတစ်ခါ ဒေါသဖြစ်တိုင်း စည်းရိုးမှာ သံမှိုတစ်ချောင်းရိုက်ခိုင်းတဲ့ ဇတ်လမ်းပုံပြင်ပါ။
ဒေါသကြောင့် တုန့်ပြန်လုပ်ဆောင်မိဖို့လဲ လွယ်ပြန်တယ်။
ဒါပေမယ့်ဒေါသကြောင့်လုပ်လိုက်တဲ့ လုပ်ရပ်ရဲ့ အကျိုးဆက်က သံမှိုကို ပြန်နုတ်တဲ့ အချိန်ကျန်ခဲ့တဲ့ အ‌‌ပေါက်ရာလို ပြန်ပြီးပြင်ဆင်ဖို့ ခက်တယ် ဆိုတာပါပဲ။
အဲဒါကြောင့် မောင်နှမကြားမှာဖြစ်ဖြစ် တခြားသူတွေနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့အချိန်မှာ ဖြစ်ဖြစ် မှားယွင်းစွာ မတုန့်ပြန်မိဖို့ အရေးကြီးပါတယ်။ စကားတစ်ခွန်းကြောင့် ဒါမှမဟုတ် ကိုယ့်လုပ်ရပ်တစ်ခုကြောင့် ပြန်နုတ်လို့မရတဲ့ ဒါဏ်ရာတွေ ကျန်ခဲ့နိုင်လို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပေါ်က ကိစ္စမှာလဲ မောင်နှမချင်း အချင်းမများကြပဲ ပြေပြေလည်လည်ဖြစ်ခဲ့ရလို့ ဝမ်းသာခဲ့ရပါတယ်။
တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ချစ်ခင် နွေးထွေးမှုကို မည့်သည့်အရာနှင့်မျှမလဲလှယ်သင့်ဟုထင်ပါသည်။ အပေါ်ကကိစ္စမှာ အမေက သူ နဲ့ သူ့သားသမီးအချို့ အဆင်ပြေဖို့ မြေကွက်ကို ရောင်းဖို့ လက်မှတ်ထိုးလိုက်နိုင်ပေမယ့်၊ သားကြီးအပေါ်ထားတဲ့ မေတ္တာစိတ်ကြောင့် သူလက်မှတ် မထိုးခဲ့ပါ။ ဒီကစ္စနဲ့ ပါတ်သက်လို့ အမေ့ကို တွေဝေတယ်လို့ ‌တစ်ချို့က ဝေဖန်ပေမယ့် ကျွန်တော်တော့ အမေ့ကို ထောက်ခံခဲ့ပါတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ အရာရာတိုင်းကို နှလုံးသား မပါပဲ ဦးနှောက်နဲ့ ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူးလို့ ထင်လို့ပါပဲ။ မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ ဘယ်လိုထင်ပါသလဲ။
ဘယ်အရာဖြစ်ဖြစ် နှလုံးသား ရှုထောင့် ထည့်မစဉ်းစားလို့ မရဘူးထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က ဓါတ်ဆီထည့် မောင်းရတဲ့ စက်တွေမဟုတ်လို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့ဟာ အမှန်အမှား၊ သင့်ညည် မသင့်သည်၊ မျှတသည် မမျှတဘူး၊ လှသည် မလှသည် ခံစားတတ်ကြတဲ့ လူတွေမို့ပါပဲ။ ကျွန်တော်လေးစားတဲ့သူတွေကတော့ မျှတသည် မမျှသည် စသည် ကို ဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး ဆုံးဖြတ်သည့်အတိုင်းလဲ ရပ်တည် လုပ်ကိုင်နိုင်တဲ့သူတွေပါ။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ တစ်ချို့လူတွေက ကောင်း၏ မှန်၏ မျှတ၏ စသည်ဖြင့် မခံစားတတ်တာကို အံ့သြစွားတွေ့ဖူးမိလို့ ကတစ်ကြောင်း၊ မှန်၏ မမှန်၏ ဆုံးဖြတ်တတ်ရင်တောင်မှ အမှန်တရားဘက်က မရပ်တည်နိုင်တဲ့ သူတွေလဲ ရှိလို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ်ကိုတိုင် မေတ္တာတရား အရေးကြီးတာနဲ့ လူတွေ သက်ရှိနေချိန် ချစ်ချစ်ခင်ခင် နေသင့်တယ်ဆိုတာကိုကို နက်နက်နဲနဲခံစားသိရှိလိုက်ရတဲ့ အချိန်က မိမိဖခင် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အချိန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လူတစ်ယောက်ကို ပိုက်ဆံနဲ့လဲ ပြန်ဝယ်ချင်လို့မရပါဘူး။ အဲဒါကြောင့် နောက်ပိုင်း ရှေ့နှစ်တွေမှာလဲ ကိုယ့်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ ချစ်ခင်နွေးထွေးစွာနေမယ်လို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့မိပါတယ်။ မိတ်ဆွေတို့လဲ ‌အနီးနားက မိသားစုဝင်တွေနဲ့ နှစ်သစ်မှာ ချင်ခင်စွာနေနိုင်ပြီး ပျော်ရွင်တဲ့ နှစ်သစ်ဖြစ်ပါစေကြောင်း ဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်ကိုတိုင်မေတ္တာထားနိုင်ကြသလို မေတ္တာကိုလဲ ခံယူနိုင်ကြပါစေ။ အားလုံး ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။
hive-122133 creativecoin trafficinsider hivelist archon myanmar proofofbrain cent neoxian ash
အမွေထက်မောင်နှမရင်းနှီးမှုကပိုအရေးကြီးပါတယ်....အချို့တွေကဒီလိုကိစ္စတွေနဲ့သူစိမ်းတွေလိုဖြစ်ကုန်ကြတာ...တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ချစ်ခင်မှုကအရေးကြီးတာပါ...Happy New Year!
ဟုတ်တယ် ။ Thanks!
nyinyiwin tipped princekham (x1)
htwegyi tipped princekham (x1)
@kachinhenry(10/15) tipped @princekham (x1)
နှစ်သစ်ဆုတောင်း အတိုင်းပြည့်ပါစေဗျာ။ !PIZZA
စာနောက်မှ ဖတ်တော့မယ် အရင် လက်ဆောင် !LOLZ
Congratulations @princekham! You receivedapersonal badge!
မောင်နှမတွေ ချစ်ခင်စည်းလုံးတာ အမွေခွဲပြီးပြီးလား ဆိုသလိုပါ။ အေးချမ်းစွာ ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့တာ
အဲဒီ အမွေဆိုင် တွေအကြောင်း ကျွန်တော်တို့ ရပ်ကွက် ထဲမှာ အများကြီးပေါ့ ရန်ပွဲ တွေ... နောက်များမှ ဖေါ်ပြပေးပါ့မယ်...!PIZZA